Yintoni i-Pokemon Go?
Pokemon Yiya Ngumdlalo wentsholongwane onganyangekiyo wentsholongwane egadlalayo nabadlala ngokuhambahamba beya kufuna iPokemon. Rumored ukuba yeyona nto iphambili yokukhangela kwi-intanethi kangangexesha elifutshane ngoJulayi, lo mdlalo uthatha umhlaba ngoqhwithela. Umdlalo usebenzisa iindawo zokwenyani zehlabathi. Injongo kukujonga umhlaba nge-smartphone yakho, ukuzama ukubamba i-Pokemon ebonakalayo. Xa i-smartphone yakho ifumanisa ubukho bePokemon, iya kushukuma ikwazise kufutshane nenye into ekubanjwayo.
Imifanekiso ngoncedo lwe www.pokemongo.com
Jonga umhlaba wokwenyani ngePokemon Go.
Khuphela i-Pokemon Go
Lo mdlalo weselula uyafumaneka kwi ios kwaye Iqonga le-Android . Lo mdlalo wasimahla unokukhutshelwa ngokulula kwiVenkile ye App okanye kuGoogle Play. Landela nje imiyalelo yokufaka umdlalo kwaye usendleleni eya kwiPokemon kumnandi!
Xa uqala, kubalulekile ukuba uvumele usetyenziso ukuba lufikelele kwindawo okuyo. Kuba lo ngumdlalo osekwe kwindawo, ungadlala kuphela ngeenkonzo zendawo ezivuliweyo.
Ukudlala iPokemon Go
Qalisa usetyenziso ukuze uqalise uhlolo lwakho lokudlala. Nje ukuba ubufumanise ubukho bePokemon, uyayifaka umgca kwaye uphonsa ibhola yePoke ukuyibamba. Nangona kunjalo, iincam zeminwe ezikhawulezayo ziyimfuneko. I-Pokemon engenakwenzeka ingashenxisa kude nokubanjwa kwe-smartphone yakho. Ukongeza, umdlalo uya kukusa kwinani lePokeStops apho unokuqokelela khona Iibhola zePoke kunye nezinye iimpawu.
Ngethuba lokuqala udlala i-Pokemon Go, umdlalo uya kukuqhubela ukuba ulungiselele uMqeqeshi wakho. Umqeqeshi yivatar yakho yomdlalo. Abadlali beGamers banokwenza abaqeqeshi babo ukuba banxibe iimpahla ezahlukeneyo kunye nezixhobo. Uya kubona umqeqeshi wakho okhethekileyo njengoko usiya kumdlalo wonke kunye nehlabathi lokwenyani. Umqeqeshi wakho unokubonwa njengenxalenye yeprofayile yakho yomsebenzisi. Jonga ezi Iingcebiso zomqeqeshi ezivela kubaphuhlisi bePokemon Go .
Njengoko uphonononga, uya kufumana amanqanaba kunye nezinto ezinamandla ngakumbi ngeyona njongo yokugqibezela iPokedex yakho. I-Pokedex yikhathalogu yazo zonke iintlobo zePokemon ozibambayo. Ukuthatha i-Pokemon enamandla ngakumbi kukunceda ufezekise le njongo. Qhubeka nokuphonononga kwaye ujikeleze umhlaba wonke ukuze uhlangane kwaye ubambe izidalwa ezingakumbi nangakumbi ezinomdla.
Nje ukuba ufikelele kwinqanaba lesihlanu loMqeqeshi, kufuneka ujoyine iqela. Kukho amaqela amathathu: iQela leMvelo, iqela le-Mystic, kunye neQela eliliQela. Njengelungu leqela, uya kukhuphisana kwiiMfazwe kwaye usebenze namanye amalungu eqela lakho ekwakheni ukhuseleko olomeleleyo kumaqela alwayo, ucela umngeni okanye ukhusele indawo zeGym.
Ukulandela imeko yokunxiba, iPokemon Go iza kubonelela kungekudala ngePokemon Go Plus. Esi sixhobo sinxitywayo sinxitywe esihlahleni kwaye siya kukwazisa ngePokemon ekufuphi. Nangona kunjalo, ekuqaleni bekulindeleke ukuba ikhutshwe ukuphela kukaJulayi, iNintendo ibuyisele umva umhla wokukhutshwa ukuya kuSeptemba 2016.
Umfanekiso ngoncedo lwe pokemongo.com
I-Pokemon Go Plus idibanisa itekhnoloji enxitywayo kumdlalo othandwayo.
Imicimbi enePokemon Go
Abadlala umdlalo balumke! Umdlalo othandwayo awukho ngaphandle kwemicimbi. Iimeko ezimbalwa ezinomdla ziye zavela njengoko iidrama zihamba zisiya kukhangela iPokemon. Omnye wemicimbi enjalo yi ukubekwa ngengozi kwendawo yokuhlala yendoda njengeGym . Ngelixa uBoon Sheridan eyiphendulile lengxaki ngobumnandi, ethumela umyalezo ngeendwendwe zakhe kwaye edlala evumela abadlali ukuba bathathe ifoto yakhe, ukungena kweendwendwe kuhlala kusisithsaba. Abadlali beGamers bayagxalathelana endlwini yakhe ngalo lonke ixesha losuku, bejikeleza ipropathi yakhe. Imicimbi efanayo iqatshelwe kwezinye iindawo.
Umdlalo ukwasebenza njengesixhobo sabaphangi abajolise kumaxhoba angalindelekanga. EMissouri, abaphangi abaxhobileyo babanjwa besebenzisa i-Pokemon Go ukutsala abadlali kwiindawo ezikude ngaphambi kokubaphanga.
Ukongeza, i-Pokemon Go ibangela ukuba iidrama zingazi kangako ngendawo ezibangqongileyo. Ukungabikho kolwazi kukhokelele izilumkiso ezininzi ezivela kunyanzeliso lomthetho . Amasebe amapolisa kwilizwe liphela alumkisa abadlali bePokemon Go ukuba banike ingqalelo ekhethekileyo kwimekobume yabo kumzamo wokunciphisa izehlo zendlela, ukungena ngokungekho semthethweni, kunye neengozi zemoto ngenxa yokudlala umdlalo.
I-Pokemon Go inokonwabisa kakhulu okoko uhoye indawo ekungqongileyo. Yonwaba!
yi-amoxicillin enxulumene nepenicillin
iintlungu emva kokususwa kwe-lipoma
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga ze-meloxicam
mingaphi imizuzu yimayile
Imiphumo emibi ye-morphine
Ukuhlengahlengiswa kwemigca ngokuchasene nokubuyela umva kumalungiselelo